Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Elu - pisklak.net
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Elu
June 06 16:15 2021 site na Admin Bipute a Nkeji edemede
Ọ bụrụ na mmadụ dị ọhụrụ na ịkụ nzọ n’egwuregwu n’ịntanetị, ịnata ụzọ 2 dị mfe na otu egwuregwu kachasị amasị ha ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịbụ ụzọ na-atọ ụtọ iji kporie ndụ egwuregwu ma nweta ego n’otu oge.
Ka o sina dị, mmadụ kwesịrị ịmụta ntakịrị ihe banyere egwuregwu ahụ ma ọ bụ otu egwuregwu iji mee ụdị egwu ahụ. Otu uru kachasị dị na ịme egwuregwu ịgba chaa chaa n’ịntanetị bụ na ha ekwesịghị ịga ebe ọ bụla ma ọ bụ mee ihe banyere nsogbu ịgba chaa chaa na cha cha. Tụkwasị na nke a, ịkụ nzọ egwuregwu n’ịntanetị na-enye ọtụtụ uru karịa ịkụ nzọ na cha cha, dị ka ha nwere ike ịme egwuregwu egwuregwu ebe ọ bụla.
Ihe mara mma nke ịkụ nzọ egwuregwu bụ maka otu ohere ndị casinos nwere. Ihe niile gbasara ịghọta ngụkọta ọnụ ọgụgụ na ihe puru omume, naanị otu mmetụta dị na mpụga nke ga-emetụta mkpebi mmadụ ịkụ nzọ si n’omume na mmetụta obi ha.
Ya mere, na isi, ndị na-agba chaa chaa na-agba chaa chaa n’onwe ha, dabere na ihe ọmụma ha, ahụmịhe, na mmetụta uche ha! Ochioma na akara aka na-ekere oke na nsonaazụ nke usoro egwuregwu, mgbe ahụ ọ bụ ihe gbasara ohere.
Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ịkụ nzọ ga na-enye mmeri mgbe niile. Ọtụtụ ndị na-agba nzọ ụkwụ na-emehie nke iche na ọ dịghị ihe dị ka ndị egwuregwu ma ọ bụ otu egwuregwu funahụrụ. Ya mere, ha ga-aga ma ghaa ọkacha mmasị ha n’agbanyeghị agbanyeghị. Mkpebi a bụ mmejọ nke nwere ike ibute mbibi ego, na mgbe ụfọdụ, nnukwu mmerụ ahụ. Usoro ịkụ nzọ dị mma mgbe niile dabere na atụmatụ egwuregwu zuru oke ma na-atụle ike na adịghị ike nke otu ọ bụla. Mmasị a ga-enyere onye na-agba akwụ ụgwọ aka izere ihie ụzọ nzuzu nke ga-efu gị ego.
Ka ọ dị ugbu a, mmadụ ga-ekpori ndụ egwuregwu cha cha n’ịntanetị mgbe ha chọtara saịtị ịgba chaa chaa kachasị mma kachasị mma maka ọchịchọ na mkpa mmadụ.
Na infographic dị n’okpuru ebe a, ụlọ ọrụ egwuregwu Kenya a ma ama, Chezacash, kere ozi nke na-achịkọta egwuregwu cha cha kachasị elu iji nwee ọ atụ n’ụlọ na ebe igwu ha egwu zuru oke ma na-atọ ụtọ niile: